Lahaina.A Block to ocean and front st.Shared condo - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e iflethi sinombuki zindwendwe onguSteve
Kwabelwana ngeebdrm ezi-2.Igumbi lakho lokulala eli-1 linebhedi enkulu.Ndihlala kwelinye igumbi.Igumbi lokuhlala lineefutons kunye nebhedi ekhoyo,Vala uhambe uye EYONKE INTO.1 indawo yokupaka.ipool jacuzzi kunye nebbq. Ndikwabhala iyunithi efanayo njengendawo yonke ngamanye amaxesha uyijonge ukuba uyayifuna indawo kuwe
I-condo ekwabelwana ngayo, igumbi lokulala labucala. Iziko lase-lahaina, yonke into entsha, ekhululekile, ethule.indawo yokupaka, iphuli, ijaquzzi, ibbqs. kunye nempahla kwipropati
1 iisofa eziyi-, umatrasi ompontshwayo oyi- 1, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1
4.90 · Izimvo eziyi-172
Ukuzola, iTropikhi kunye KAKHULU kufutshane nevenkile yegrosari, iivenkile, iindawo zokuphumla, ubomi basebusuku, ngaphambili kunye nolwandle.
Ndiza kusebenzisana neendwendwe rhoqo okanye kancinci njengoko zithanda. Ndihlale eMaui iminyaka engama-31 kwaye ndinolwazi oluninzi. Nangona kunjalo ndihamba rhoqo, ukuze ndingahlali ndisesiqithini. (umphathi wendawo kwindawo.)
Inombolo yomthetho: 460100020011, TA-157-607-6288-01